Isifundo: hlaziya i-iPhone yakho kwi-iOS 5.1 ngaphandle kokufaka i-baseband (Windows kunye neMac) | IPhone iindaba
UGonzalo R. | | iOS 5, Jailbreak, Izifundo kunye neencwadana
Ngalesi sifundo uya kuba nakho ukuhlaziya i-iPhone yakho kwi-iOS 5.1 ngaphandle kokufaka i-baseband ukuze ukwazi ukusebenzisa iGevey SIM okanye i-ultrasn0w. Lumka, ayisiyi-jailbreak, ihlaziya kuphela ngaphandle kokufaka i-Baseband kwaye emva koko unokwenza i-jailbreak ngesiqhelo.
I-Ultrasn0w ayikahambelani ne-iOS 5.1, nangona ngethemba lokuba izakuhlaziywa kungekudala. Qaphela: Olu hlobo lwenkqubo lunomngcipheko wokuphulukana nokuvula kwe-iPhone yakho ukuba uyayenza gwenxa, yenze ngononophelo olukhulu.
Ukuba i-iPhone ikwinguqulelo ngaphambi kwe-iOS 5.1
yenza i-baseband yakho ihambelane ne-Ultrasn0w okanye iGevey SIM
IOS 5.1 ngesixhobo sakho
Khumbula ukuba emva yale nkqubo Unokwenza i-jailbreak ephucukileyo (ubotshelelwe) kwaye uyakufuna ukuqala kwakhona ixesha ngalinye ngeRedsnow usebenzisa ukhetho "vele uthinte i-boot ngoku" (kubandakanya ixesha lokuqala, okanye iCydia okanye iSafari ayizukusebenzela). Isifundo: ukuqhekeka kwejele kubotshelelwe kwi-iOS 5.1 kunye neRedsn0w (iMac kunye neewindows)
Vula iRedsn0w kwaye ukhethe Windows RT:
Emva koko ukhethe Isiko IPSW
Khangela ikhompyuter yakho kwi-firmware ye-iOS 5.1 yesixhobo sakho osikhuphelileyo
I-firmware yakho iya kuqala ukwakha
Xa ugqibile lo pop-up uya kuvela, cinezela OK
I-firmware yakho iya kwenziwa kwifolda efanayo neRedsn0w.
Khetha ukhetho I-DFU ekhuselweyo
Qhagamshela i-iPhone yakho kwikhompyuter kwaye uqiniseke ukuba icinyiwe.
Landela amanyathelo ukuyibeka I-DFU
Iya kuqala ukusebenzisa ukuxhaphaza ILimera1n
Ngoku yiya kwi-iTunes
Cinezela Shift + Buyisela (Alt + Buyisela ukuba usebenzisa iMAC)
Khetha i-firmware oyenzileyo
Uya kuyazi ngenxa yokuba igama layo liqala HAYI_BB
iTunes iya kubuyisela i-iPhone yakho kunye ne-firmware.
Ukuza kuthi ga ngoku uhlaziyo, ngoku Unokwenza i-jailbreak iOS 5.1 ngale sifundo
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 5 » Isifundo: hlaziya i-iPhone yakho kwi-iOS 5.1 ngaphandle kokulayisha i-baseband (Windows kunye neMac)
Enkosi Gonzalo ngesifundo !!!
Ndizakuyifumana kwakamsinya nje ukuba ndinexeshana.
Molo ndine-3gs ye-iphone kwaye ndenze isifundo esinye njengawe kwaye ndinekrini emthubi endinokuyenza!
Ndiyenzile nge iphone 4 kwaye yonke into ilungile.
Kujika kube tyheli ngaliphi ixesha? Uqinisekile ukuba unayo ibhetri? Xa i-iPhone 3 GS yomfazi wam iphelelwa yibhetri, isikrini sijika sibe tyheli xa sibiza.
Oko kwenzekile kum, sihlobo sam, kuba i-lcd sele iqala ukusilela.Ndicebisa ukuba uyitshintshe, ke, ulinde loo mntu ukuba abhake emva koko uyitshintshe.Kwenzeka into efanayo nakum.
Phendula ku freddy
Ngendlela efanayo ndiphelelwe yibhetri kwaye isikrini se-iphone sam simthubi ndingasivula ixesha elingakanani ukuze sisebenze ngokwesiqhelo ????? Nceda …… ..
Hee mfondini, kwenzeka into efanayo nakum, into endiyenzayo ibetha nje "ibhuthi" kwaye yenze inkqubo yokudityaniswa kwamaqhosha, kwaye iyodwa iqala ukwenza ukuqala kwakhona, ngamanye amaxesha kuye kwafuneka ndiyiphinde le nkqubo de ndivuselele iphone yam , Ngoku ingxaki yam kukuba xa ndiyisebenzisa ingena kwimowudi ye-DFU. kodwa ukuba andiyisebenzisi kakhulu kunokuthatha ixesha elide ndifuna, ngokuya ndafumanisa ukuba i-fireware inento yokwenza nemodeli yebhetri.
Rodrigo, zama ukunika iinkcukacha ezithe kratya malunga nengxaki ukuze mhlawumbi umntu othile akuncede uyisombulule, umzekelo kweliphi ixesha apho isikrini "sityheli" kwaye loluphi uguqulelo lwe-ios owawunalo ngaphambi kohlaziyo, umzekelo. 😉
Mhlobo wam, ndiqinisekile ukuba wenze into engalunganga, ayisosigculelo, kungasathethwa ke ukuba kwinxalenye yenkqubo oyilahlekileyo exhaphake kakhulu kufuneka uzame kwakhona okanye ukubuyisela umzi-mveliso kwaye uphinde inkqubo kwaye ngononophelo olukhulu ukuze kungenzeki okufanayo
Inguqulelo yangoku yeSpire (1.0.1-1) ayixhasi i-iOS 5.1
Thatha i-90 yee-euro uyeke ukukhathazeka malunga ne-baseband kwakhona, yiya kwi-gsmspain kwaye ujonge umsebenzisi ********, simahla yonke iphone kwaye ushiye amabali ngeebasebands kunye nee-ultrasnows xD
Molo, ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba i-ultrasn0w ye-3gs ene-bb 06.15 isebenza ngo-5.1 ?? ngokubhekisele !!
Ndifuna ukwazi okufanayo, ke ndiyayilandela le ntambo. Nabani na onalo uluvo ???
Mholweni!! Ndinee-3gs ezifanayo kwaye okwangoku kubonakala ngathi i-ultrasn0w ayisebenzi no-5.1 kodwa ukuba bayayihlaziya ukuze iphume kwiintsuku ezimbalwa ezizayo okanye ndifunde ... into eqinisekileyo kukuba ayisebenzi sebenzela olo hlobo kodwa kubonakala ngathi akukho lutshintsho ngokubhekisele kwi-bb ziya kufana nohlobo lwe-ultrasn0w 1.2.5 ... emva koko i-1.2.6 ukuba ingayixhasa i-06.15
Ndenze isiko kunye neRedsnow emva koko ndalandela iinkqubo zonke zahamba kakuhle kodwa khange zisebenze kum ukujonga i-imeyile emiselweyo ye-iphone kwaye ndiyibuyisele kwakhona ndisebenzisa isiko kwaye ngalo mzuzu xa iqala ukuhlalutya ukubuyisela I-screen esityheli kwi-iphone nakwi-itunes ndifumana impazamo ye-1600 ngamanye amaxesha ezinye iimpazamo kwaye andazi ukuba ndenzeni.I-iPhone yam yi-iPhone 3GS entsha ezantsi ene-6.15.00 baseband.Ndingenza ntoni ukusombulula le ngxaki?
Impazamo kaGoogle "1600 iphone" (ngaphandle kwezicatshulwa).
oku kungasetyenziselwa ukwehlisela kwi-ios 5.0.1 ukuba sine-firmware eyenziweyo kunye ne-shsh yethu?
Enkosi ngesifundo, uGonzalo.
Ndiyazi ukuba ikwicala elo, kodwa ndinombuzo. I-4S yam ye-jailbroken iyaqala ukunciphisa ixesha lebhetri. Ngaba kunokwenzeka ukuba ndibuyise i-5.0.1 endinayo ngoku okanye kuya kufuneka ndiye kungenakuguqulwa ku-5.1?
UJuan Zamo sitsho
Ndiza kukuphendula. Ukuba ubuyisela i-4S ngokuthe ngqo ku-5.1. Awusenakuya ku-5.0.1 nokuba une-SHSH. Kufuneka ulinde.
Ngomnye umthambo… ongafundiswanga…. Kubonakala ngathi ayizukubamba kakhulu, akunjalo? Ngokwendlela ozibona ngayo ukuba i-therated ikhuphe ngokukhawuleza njengakwinguqulelo yangaphambili ... masibone ukuba ngaba isiciko siphume ngokukhawuleza na ... sipholile!
Phendula uJuan Zamo
Enkosi, uJuan Zamo. Oko kwenzeka ngamabona-ndenzile! Nje yeentsuku ezimbalwa ... Le yinto embi nge-iPhone.
UCrustián Alonso Z. sitsho
Impazamo 16xx ilungisiwe kusetyenziswa isixhobo esibizwa ngokuba yi-iReb. Esi sixhobo sibeka iphone kwimodi ye-dfu. Ndiyathemba ukuba uncedo lwam luya kuba luncedo kuwe.
Imibuliso evela eChile.
Phendula kuCrustián Alonso Z.
Molo, ndisebenzise iReb kunye nengxaki yescreen sam esimthubi xa ukubuyisela kuyaqhubeka ke andazi ukuba ndenze ntoni: C
Mholweni!! Ndinengxaki kukuba ndihlaziya i-iphone 3gs yam ibe ngu-5.1, kwaye yonke into ilungile ngaphandle kwesiginali (ngaphandle kwenkonzo) kuyacaca ukuba i-ultrasn0w ayihambelani nale nguqulo okanye andazi ukuba iya kuba yenye ingxaki na intsha entsha kule nto (yiyo loo nto le ngxaki: /) kwaye ndingazi ukuba ndenzeni ukuyenza isebenze okanye ukuba ndingabuyela ngandlela ithile ku-5.0.1… .. enkosi !!
Ngaba ikhona indlela yokwenza iphone ukuba i-chip yoqobo?
I-iPhone 3Gs yam ndiyivuselele kwinguqulelo 5.1 kwaye yahlala "isebenze kwi-iPhone" ukusuka apho ayizukuvela, ibeka umqondiso othi
“I-iphone ayinakwenziwa isebenze kuba iserver yokuvula ayifumaneki okwexeshana. Nceda uzame kwakhona kwimizuzu embalwa okanye uzame ukudibanisa i-iPhone yakho ne-iTunes ukuze uyisebenzise.
Ukuba ingxaki iyaqhubeka, nxibelelana neNkxaso yeApple kuApple.com/en/support.
ngendlela ifowuni yam i-gringo kwaye bayizisa kum eGuadalajara kwaye isebenza kakuhle, bendinejalibreak kwaye yakhutshwa, kodwa le yenzeke kum xa ndiyivuselelayo kwinguqulo 5.1
• Umntu onokundinceda nceda.
Molo, kwenzeka into efanayo kum kwaye ndiyikhuphe kwelo lizwe kwaye ndayeka ukwenza oku kulandelayo, kufuneka uyilayite ubotshelelwe kwikhompyuter ndiyathetha ukuba kufuneka uyilayite nge-redsnow 0.9.16b6, ungena apho kwaye uya kwizinto ezongezelelweyo kunye nokongeza uqala nje kwaye ulandele amanyathelo ndiyathemba ukuba iyakusebenzela
Enkosi!!! Kodwa ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ndingazilungisa njani ii-3Gs zam njengoko ndizikhupha apho ??? Kuba ayisebenzi, yima ukuba andinakwenza i-jalibreak kwaye ndiyikhulule, andinakusebenzisa nantoni na; (; (; (; (; ((; (; (; (; ((;; (; ()))) khala kwaye uyiphose kwi-chingada; (; (nceda !!!!!!! nceda
UWilmer Torres sitsho
Kulungile ndiyenzile [inkqubo amaxesha ali-10, njengoko injalo iposti kwaye indinika impazamo elandelayo kwi-Itunes: le iphone coul ayizukubuyiselwa, le devine ayifanelekanga kulwakhiwo oluceliweyo, ndine-iphone 4 gsm iOS 5.0.1 .XNUMX ngejele, ingaba ukhona umntu owenzekileyo kule nto?
Phendula uWilmer Torres
Yaaaa hayi mamennnn !!!! Ndincedeeeeeeee !!!! Ndiyilungisa njani i-iPhone 3Gs engenamsebenzi ngokuhlaziya kuhlobo 5.1; (; (PLEASE !!!!!! SIIIIII
Alessandro, apha ngekhe usifumane isisombululo kule ngxaki ingaqhelekanga. Khangela kugoogle ezakukusa kwiiforamu ezithile apho banokukunika imibono yokuyisombulula.
Ngaba ukhona umntu owenze esi sifundo kwaye wenza i-gevey Turbo isebenze ngempumelelo?
Baphoswa yikhampasi, emva kokuba benze i-firmware yesiqhelo kwiRedSn0w kufuneka bayinike kwiRedsn0w efanayo apho ithi khona eyongezelelweyo emva koko kwiPwned DFU emva koko bavula itunes kwaye babethe isitshixo sokutshintsha kwaye bayinike ekubuyiseleni ukhethe i i-firmware ethi No_BBxxxxxxxx kwaye mandenze inkqubo. Sele ndibuyisele iphone 4 nge-turbo sim kwaye ukuba iyasebenza, yiya ku-5.1 kwaye iqhubeke nokusebenza ngokugqibeleleyo; Ingxaki kuphela kukuba andizange ndenze i-backup ndicinga ukuba iya kuba haha ​​haha ​​kodwa kungenjalo iphelele.
Ndifuna ukubuza ukuba le ndlela ingasebenza na kwi-iphone 4s yam, ANDIFUNI UKUYI-JAILBREAK IT, ndifuna ukuyivuselela ibe ngu-5.1 kuba ndine-gevey ye-ultra sim kwaye isebenza kuphela nge-bb 1.0.13 phakathi kwabanye. Ngaba ukhona umntu onokundinceda?
molo ndine-iphone 4 ene-bb 1.59 ios 5.0.1 ndingazibeka ezi custos? okanye kufuneka ibuyiselwe ngaphandle kokuqhekeka kwejele okanye nantoni na ukufumana iios kakuhle kwaye hayi iingxaki ze-iTunes?
Imibuliso ndinombuzo olula endiwenzayo lo mkhuba ndiwufaka kwaye NDIWUQALA NJANI ????? Oko kukuthi, ndibuza ukuba kutheni i-iphone 4 yam ikhutshwa nge-gevey sim ngaphandle kwe-jailbreak kwaye andinayo i-sim yoqobo, nceda uphendule
Molo Ngaba esi sifundo se-iPod 4g ????
Molo ndine-iphone 4, kwaye ndifuna ukuyivuselela ngaphandle kokufaka i-baseban kuba ndisebenzisa i-gevey, ndiwenzile onke amanyathelo achazwe apha kubandakanya i-tinyumbrella, kuba ndifumana impazamo 3194, kodwa inyani andazi wenzeni, ucebisa ntoni ???
Molweni zihlobo, inyani kukuba ndimncinci kwi-iPhone 4, kuba kwixesha elifutshane elidlulileyo belithunyelwe kum lisuka e-USA, ndihlala eGuatemala, ingxaki kukuba ndine-ios 4.3.1 kunye ne-baseband 04.10.01. 5.1, kwaye ndifuna ukuyikhulula ukuze ndikwazi ukuyisebenzisa nenkampani yalapha, ifowuni yayivela kwi-AT & T e-usa, sele ndigqibile ukujonga kuyo yonke indawo kwaye andisifumani isisombululo kuba ukuba ndilayishe kwi-ios 0 (I Ndiza kuyenza nge-redsn4w ukuze ungalayishi i-baseband) ayihambelani naleyo baseband, Kwaye kwinto endiyibonayo kwi-iPhone 01.59.00 kukho kuphela i-XNUMX nceda undincede kuba andikwazi ukusebenzisa i-iPhone yam ngaphandle kokufikelela kwifowuni. Inethiwekhi, ndiya kukubulela ngesifundo esisebenzayo, kuba apha kunzima kakhulu, mhlawumbi akunakwenzeka ukufumana i-gevey, enkosi ngoncedo lwakho.
I-04.10.01 baseband iyahambelana ne-iOS 5.1 (ezinye ayisiyiyo?), yeyona ndinayo. Omnye umba kukuba ufuna i-baseband enokuvulwa, ikhutshwe ukuze ikwazi ukuyisebenzisa kunye nawuphi na umsebenzisi, umba endingawaziyo.
Into epapashiweyo kwezi ntsuku kukuba i-AT & T sele iqalile ukukhupha ii-iphones ezizalisekise isigxina ngendlela elula neqhelekileyo: https://www.actualidadiphone.com/2012/04/09/att-comienza-a-desbloquear-los-iphone-de-forma-gratuita/
Ndine-3GS ene-4.2.1 kwaye ndifuna ukuyifaka ku-5.0.1 engafakwanga ngaphandle kokufaka i-baseband, ngaba ikhona indlela yokwenza ngoku ukuba iapile isayine u-5.1?
Mholweni!! Itunes ayindivumeli ukuba ndivumelanise i-ipone 4 kwaye ngenxa yoko andinakuhlaziya ukusuka apho. Yahlaziywa ngeredsnow, ngaba ndiza kuphulukana nezinto endinazo?
Molweni nonke, ndine-iPhone 4 ene-ios 5.0.1 kunye ne-baseband, ngelishwa lam i-4.11.08. Kwaye i-jailbrake echo. Umbuzo wam ngowokuba ndiyahlaziya kwi-ios 5.1 nge-itunes, ngaba i-baseband iya kulayishwa kwenye endinokuyenza kamva yenza i-jailbrake emva koko wltrasn0w okanye ngokuchaseneyo inyukela kwenye engenakukhululwa okanye enganyukiyo? Ucebisa ntoni? Ndiyabulela kakhulu.
Ukuba uhlaziya nge-itunes, ulayishe i-baseband kwenye engafumanekiyo nokuba yi-gevey okanye nge-ultrasnow, kuya kufuneka wenze i-customfirm njengoko isifundo sisitsho apha kwaye uhlaziye ngokuthe cwaka, enye into endinokukuxelela yona ugcine i-sh isixhobo sakho ukuba ufuna ukubuyela kwi-ios onayo ngoku kungenjalo wakunyuka akukho kubuya mva.
Molo, ndiyenzile yonke inkqubo kwaye ihambe kakuhle kodwa nge-gevey ayithathi mqondiso, umntu onokundinceda.
Abanye abane-Cydia, kulungile ukuba bakhuphele usetyenziso lwe-SAM, banokuyikhangela kwiNdlela yokuvalelwa kwejele / kuGoogle, usetyenziso lusinceda ukuba sixelele umnxeba kwilizwe esifuna ukuba lisebenze kulo kwaye likubone ngokuzenzekelayo oko kufanelekileyo umqhubi. Ngokuqinisekileyo unokuyikhupha itel kumsebenzisi osekiweyo.
Ngaba sele uwenzile umqondiso wakho wokumisa we-iphone ????
Molweni nonke, ndifuna nje ukwazi into, ndiyathemba ukuba niyandinceda .. Kulungile okwenzekayo kukuba ndithenge i-iPhone 3GS ene-iOS 4.3.3 kunye ne-baseband 6.15.00 esele ikhutshiwe yinkampani ye-telcel kwaye ndifuna ukwazi ukuba ndingakwazi uyihlaziye kwi-iOS 5, 5.0.1. 5.1.1 okanye XNUMX ngaphandle kokulahlekelwa yiyo nantoni na okanye ngaphandle kokuchaphazela nantoni na, okanye undixelele ukuba ichaphazela into kwinkqubo, enkosi kakhulu ndiyathemba iimpendulo.
UJuan Ignacio sitsho
Ndine-iphone 5 ene-ios 4.3 kunye ne-cydia efakwe kwi-AT & T. Ndiyisebenzisa nge-gevey, ndingathanda ukuvuselela kwi-ios 5 ngokwenza le nkqubo, ndingayihlaziya na ios ndisebenzisa i-gevey efanayo? Ngaba likho ithuba lokuba oku kuzakundinika impazamo kwaye kamva kufuneka ndibuyisele itunes ngokufaka i-baseband kwaye ndilahlekelwe kukuvula? Enkosi !!
Phendula u-juan ignacio
Pablo miranda sitsho
Ndine-iPhone 4 ene-GEVEY SIM PRO, ene-firmware 5.1.1 (ihlaziywa nje, ngokwephepha) kunye ne-baseband 04.10.01 (ndiyigcinile) kwaye ngexesha lokuhlaziya kunye ne-redsn0w_win_0.9.10b6 ndilandela yonke Amanyathelo nayo yonke into ilungile, iyahlaziywa ndigcina ulwazi lwam nayo yonke into kodwa ngexesha lokusebenzisa ngesandla ngokucinezela iqhosha lokwamkela kumyalezo uze ulinde ibha yokuqala yomqondiso ukuba ivele, andithathi mqondiso inkampani CLARO, ngaphaya apho ndabona ividiyo emva kokuba uhlaziyo lunokwenziwa kodwa kuphela ngeSim yoqobo, ndifuna uncedo kuba iSim endiyisebenzisayo ayisiyo eyokuqala ,,, engxamisekileyoeeeeeeeeeee. Nceda
Phendula Pablo Miranda
Molweni nonke, ukuba umntu unokundinceda, ndizama ukwenza isiko ngohlobo 5.1.1 lwe-iOS kwaye indixelela ukuba ukusilela kwenzeke kwaye isiko alenziwanga, andazi ukuba kwenzeka ntoni, kwaye omnye umbuzo, Ndifundile ukuba i-ultrasn0w ayisebenzi nge-iOS 5.1.1, ngaba inguqulelo yamva nje ye-ultrasn0w isebenza nge-ios 5.0.1? Enkosi ngoncedo kwangaphambili. Konke okugqibelele.
Nceda, ndifuna uncedo, oku kulandelayo kuyenzeka kum:
Ndenze yonke into ethethwa yividiyo PLEASE !!!
Awunakuyivula i-iPhone 4 yam, yayithunyelwe kum isuka e-USA kwaye ayifumani mqondiso kwilizwe lam.
Ndingenza ntoni kuba ndenze i-jailbreak ????? imeyile yam yile uphawu.hudson.ra@gmail.com
uncedo olungxamisekileyo !! Yonke into isebenza kakuhle kum ndide ndifune ukuyibuyisela, indixelela «i-iPhone ayinakubuyiselwa. Impazamo engaziwayo (3194) yenzekile »ngoba? Ndingenza ntoni ukuze ndibe ne-ios 5?
Phendula ku jchu
molo ndinengxaki ne-iphone 3g yam ... kwenzeka ntoni kukuba bendifuna ukuyingqamanisa ne-pc yam, yonke into ibilungile, ibingqamene kodwa xa ndigqiba i-itunes kwabonakala ukuba ayinayo i-sim khadi, kunye I-iphone ibonakele kum «ayinakuyenza isebenze iphene kuba iserver yokuvula ayifumaneki okwexeshana. zama kwakhona kwenye imizuzu .. kwaye emva kwemizuzu emi-3 ndivela ngokufanayo ... ..ukuba umntu unokundinceda ndiya kuyixabisa kakhulu
Phendula ku romu
Ewe ndine-iPhone 4 evela eSpain ngoku ndisePeru ndathenga iGevey kakuhle ndifuna ukwazi ukuba ingxelo ebonakala kulwazi lwam ndingayitshintsha, okwangoku ikwi-4.3.2 kunye ne-firmware yemodem 04.10.01, noc ewe i-gevey yam iyakuvumela kwaye ukuba ndenza oko kuphuma apha kuzakwenzeka ntoni koluphi utshintsho 4.3.2? okanye 04.10.01? sukundiphendula ngezinto ezinje nge-bb okanye i-iOS kuba akukho ck kukuba ndimtsha koku ndifuna ingcaciso eneenkcukacha nceda 🙂
IHnrock Ortiz sitsho
Ndine-4.3.1 ene-baseband 04.10.01 kwaye ndinayo i-gevey, ndingayenza ngaphandle kwengxaki, ingaba i-gevey izakusandisebenzela?
Phendula Hnrock Ortiz
Indinika ukusilela 1602 kwikhompyuter enye kunye nama-3194 kwenye, naziphi na izimvo?
Kwividiyo ithi, ukuba inika impazamo ekusebenziseni ukhetho LOKUQINISEKISA UKUBUYELA, kuya kufuneka ubone ividiyo epheleleyo.
UCamilo Ernesto Garcia Blanco sitsho
Umbuzo omnye, ndiza kuphucula (ndisebenzisa i-turbosim), kodwa ndingathanda ukwazi ukuba xa ihlaziyiwe, ngaba kubalulekile ukubeka i-SIM yenkampani yoqobo?
Phendula kuCamilo Ernesto Garcia Blanco
Ukuthenga okanye ukungathengi i-iPad entsha? Sikunceda uthathe isigqibo